Gresy: Monomonona manoloana ny tetikasa fananganana fefy sy ny fandroahana mpifindra monina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2011 11:44 GMT
Ny harivan'ny andro niandrasana ny taona vaovao dia niteraka fanehoan-kevitra kahery vaika ny fanambarana nataon'ny ministra Grika ho Fiarovana ny olom-pirenena, Christos Papoutsis, mikasika ny tsy fsisian'ny indrafo ao anatin'ny politikan'ny governemantany amin'ny resaka fifindra-monina:
Nahatratra ny fetra farany fandraisany ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ny fiarahamonina Grika. Te-hanazava aho eto fa ireo mpifindra monina manana taratasy fiarovana iraisam-pirenena ihany no afaka miditra eto amin'ny firenenay. Ny ankoatra izay dia handao an'i Gresy, na izany fodiana an-tsitram-po na fandroahana avy amin'ny taratasy.
Ireo tetikasa naroso ho fampihenana ny fifindrà-monina, isan'izany ny fananganana fefy 12.5 km eo amin'ny sisintany iraisan'i Evros sy Torkia, famerenana ireo toby miaramila taloha ary fanofàna fonja mitsinkafona mba handresen-dahatra sy hitànana ireo mpangataka fialonkalofana, dia tsy nampivaky loha loatra ny Komisiona Eropeana, nefa nahatonga fitsikerana avy amin'ny vahoaka, ireo ankolafy mpanohitra sy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona. Nohamaivanina ireo fepetra ireo, araka ny tatitry ny media.
Ireo fanehoan-kevitra tanaty bilaogy
Apostolos Tsompanopoulos dia mahatsiaro ny vohitry ny nofy sy poety Grika iray malaza, izay nifindra monina:
Nampahatsiaro zavatra roa ahy izany: ny rindrin'ny Mega-City One, izay nanasaraka izany amin'ny Cursed Earth (Tany voahozona), sy ny rindrin'ny C. P. Cavafy. Nieritreritra aho fa “mpifindra monina tsy ara-dalàna” ireo raibe sy renibeko, rehefa tonga teto Gresy izy ireo [..] Avy eo dia nieritreritra aho fa ireo izay miaina manamorona ny renirano dia tsy afaka hahita azy io intsony.
Nandroaka ahy ivelan'izao tontolo izao izy ireo, tsy nisy fiantrana.
Tsy tiako ilay tontolo noforoniko, ry dadabe.
Fotis Vassileiou mitsikera ny governemanta amin'ny fanisiana rindrina ny firenena amin'ny politika mampijalinyy:
Ny fepetra tena mety hanoherana ny fifindra-monina tsy ara-dalàna dia ny politika novolavolain'ny governemantanao. Mpifindra monina iza, na ara-dalàna na tsia, no te-hipetraka any amina firenena izay ampahantraina tsotra izao ny ny mponina [..], izay misy herisetra sy fampitahorana isan-karazany raiki-tampisaka: ideolojika, fombàna fanjakana, fanoheram-panjakàna, ivelan'ny fanjakàna, sy ny media?
Vetivety ny nivoahan'ny sary namboamboarina mikasika ity tetikasa famefena ity. Ny mpanao gazety an-tsary mahaleotena Craig Wherlock dia namoaka taharon'afisy fizahan-tany malaza, mampatahotra:
Jereo ireo harena miafin'ny firenenay #teixos -an'i Craig Wherlock
Architect nvenia dia maminavina ny hevitr'ireo mpifindra monina rehefa tonga izy ireo,
#teixos -an'i @nvenia
… raha ny teratany Evros, alex_walex koa dia nanao sarin'ity fefy ity avy eny amin'ny habakabaka:
Sary mampiseho ny fahitàna avy eny amin'ny habakabaka ny #teixos -an'i alex_walex
malahelo ny tontolo taza-maso izay ho very amin'izany i Eliza Kalesi:
Ny renirano Evros… #teixos -an'i Eliza Kalesi
Misy ireo fimonomononana noho ilay tetikasan'ny governemanta ao amin'ny Twitter: ny tenifototra #teixos no tonga dia voafidy – izay midika hoe “rindrina” fa tsy fefy amin'ny teny Grika – nalaina avy amin'ilay hira malazan'i Pink Floyd, “The Wall”. Maro ireo mpampiasa Twitter no nanao kilalaon-teny mifandraika amin'ity hira ity, tahaka ny Cavafy:
Manàngan-drindrina hiandrasana ireo Olon-dia va ianao?
Mandrava rindrina ianao hiandrasana ny Pink Floyd
Ny mpiandraikitra amin'ny fanomezam-baovao ho an'ny daholobe ao amin'ny UNHCR Grika , Ketty Kehayoylou dia nampiasa ny Twitter mba hitsikeràny amin'ny fomba ofisialy:
Tetikasa hametrahana rindrina ao amin'ny sisintanin'ny Gr/Tur #UNHCR: ny fanaraha-maso ny sisintany dia tokony ho fiarovana ireo mpialokaloka. Tsy dia mamaha ny tena olana loatra ny fanangànana rindrina.
Anestis dia mifantoka amin'ny resaka tontolo iainana:
Ankoatra ny zavatra miharihary, inona ireo olana mety hateraky ny rindrina/fefy eo amin'ny lafin'ny tontolo iainan'ny biby eo amin'ilay toerana?
Mampitandrina an'ilay ministra i Thanos Koukoulis:
Tsy dia misy ilàna azy ny rindrina satria hirodana ihany izy ireo, na izany ho an'ireo kiriana na ho an'ireo mamoy fo
Nanao teny tsy loa-body tamin'ny tononkalon'i Cavafy ihany koa i Spyros VJ,
Ny rindrina tena izy dia efa voapetraka tsara ao an-dohantsika, ao anaty masontsika sy ao an-tsofintsika.
Krotkie dia maneso:
Nahoana no manelingelina antsika ny rindrina? Ilaina izany ho fiverenana any amin'ny andro fahagola izay efa nokasaina aman-taona maro izao.